गौतमबुद्ध विमानास्थल बनाऔं::DainikPatra
गौतमबुद्ध विमानास्थल बनाऔं
आम नेपाली जनतामा गौतमबुद्ध विमानास्थल बन्छ भनेर एउटा आशा, भरोसा र उत्साह बढ्दै जाने समयमा फेरि निराशा बढाएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा नेपाल सरकारले छिट्टै पूरा हुन्छन् भन्ने विश्वास बढेको थियो । राज्यले नै प्राथमिकतामा राखेर संघको प्रत्यक्ष निगरानीमा सफल हुन सक्ला भन्ने लागेको थियो तर अहिले नेपाली समाजमा निराशाको बादल लाग्न थालेको छ । संघका आयोजनाहरु भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाहरु झन चुस्त बन्दैछन् र गति पाउन थालेका छन् ।
नेपाली जनतामा समृद्धिप्रति आशा र भरोसा पलाउन थालेको थियो । बन्दैन र हुँदैन भन्ने नकारात्मक चेतना हट्न थालेको थियो । यी दुबै योजनाहरु एकाएक अलपत्र पर्न थालेका देख्दा उत्साह घटाउने काम भएको छ । नेपाली जनतामा विश्वास र भरोसाको टेक्ने हाँगो भाँचिएको छ । मेलम्ची योजना र गौतमबुद्ध विमास्थल जस्ता राष्ट्रिय योजनाले समृद्धिमा आशाको सञ्चार गराएका थिए । लगभग सत्तरी प्रतिशत ज्यादा काम भई सकेका गौतमबुद्ध विमानास्थलमा अनावश्यक विवाद निम्त्याएर विकासलाई पर धकेल्ने काम भएको छ । यो दुखद कुरा हो ।
नेपाल सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न बनाउने लक्ष लिएको थियो । स्व.रवीन्द्र अधिकारीले कुनै पनि कुराको अभाव हुन नदिन निरन्तर खटेका थिए । दैवी विपत्ति भोग्न नपरेको भए सायद आजसमम यो विमानास्थलको धेरै काम भईसक्थ्यो । यसको समस्या निम्त्याउने पक्षहरु धेरै छन् । एउटा त तर थप बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालयले केही ढिलासुस्ती गर्नुले अनिश्चयको वातावरण बन्न पुग्यो । तथापि अर्थमन्त्रालयले आयोजनाको लागि पुनः ७० करोड रकम पठाएको छ । दोस्रो कुरा गौतमबुद्ध विमानास्थल सम्पन्न बनाउने महाअभियानमा नदीजन्य पदार्थको आपूर्तिमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले ऐतिहासिक गल्ती गर्न पुग्यो । उसले पुरानो मूल्यमा आपूर्ति गर्न नसक्ने भनी अड्डी लिएपछि अन्य कामहरु पनि यस्तै अलपत्र भएको होे ।
हुन त समृद्धिप्रेमी जनताले बुवल उपमहानगरपालिकाले आपूर्ति विरुद्ध लिएको निर्णयको तीव्र निन्दा गरेपछि निर्णय फिर्ता त लियो तर विमानास्थल निर्माणको इतिहासमा गल्ती गरेको देखियो । यो निर्णयले अस्थिरता पैदा ग¥यो । ठेकेदारलाई योजना नै छोडेर भाग्ने अवस्था ल्याउने कुराहरु यस्तै यस्तै कुराहरु पनि हुन् । कहिलेकाहीं अधिकार खोज्दा पनि त्यसो दुश्प्रभाव पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुटवल उपमहानगरपालिकाको यो निर्णयले देखाएको छ ।
कुनै पनि आयोजनाको लागि प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता पर्छ । रवीन्द्र अधिकारीको मृत्युपछि प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखियो । विकास निर्माणमा प्रभावकारी समन्वय हुन सकेन भने गति लिन सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यो मन्त्रालय आफूले अठ्याएर हैन नयाँ नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेर उड्यन तथा पर्यटनलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्री आफैले गर्न सम्भव छैन ।
अन्त्यमा यो एउरपोर्ट बन्नु ५ नम्बर प्रदेशको समृद्धिको लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । पूर्वाधारले आर्थिक वृद्धिलाई द्रूत बनाउँछ । नेताहरुले डबल डिजिट भने पनि पूर्वाधार बन्न नसके डबल डिजिटको कुरा मन्तव्यमा आउला तर गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन ।
बाढी र पहिरोसंगै सर्पको टोकाई र हुने मृत्यृ बढ्दै
दैनिक पत्र संवाददाता /आइतवार, भदौ १, २०७६
संविधानमा बालअधिकार : व्यवहारमा बालश्रम
समृद्धिका लागि भौतिक विकास र सकारात्मक सोच
दोहोरो सुविधा नलेऊ
दैनिक पत्र संवाददाता /शुक्रबार, साउन ३१, २०७६
श्रावणी ः एक नाम अनेक कर्म
तीज संस्कृतिमा रूपान्तरण
डा. प्रकाश बुढाथोकी रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका– ६ गणेशपुरका राजेन्द्र र राधा सुवेदीका २...
इन्दिरा पाण्डे सामान्यतया बालबालिका भन्नाले साना उमेरका केटाकेटी भन्ने बुझिन्छ । बालबालिकाको परिभाषालाई जो जसले...
घनश्याम कोइराला यतिबेला हामी समृद्धि र सुखका कुरा गरिरहेका छौँ । यो हाम्रो राष्ट्रिय संकल्प...
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सातवटा प्रदेश कमिटीमा सहइन्चार्ज थप गरेको छ। नेकपाको शुक्रबार...
पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : रवि लामिछानेलाई ५ दिन हिरासतमा राखिने
चितवन । पत्रकार शालिग्राम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित ३...
गुगल म्यापलाई टक्कर दिँदै हुवावे, ल्याउँदैछ आफ्नै म्याप सर्भिस
चिनियाँ कम्पनी हुवावेले गत हप्ता आफ्नै स्मार्टफोन अपरेटिङ सिस्टम सार्वजनिक गरी प्रविधि क्षेत्रमा हलचल...
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा)ले बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने भएको छ । नेकपा...
नेकपा स्कुल विभागमा ईश्वर पोखरेल, सबै विभागको टुंगो लाग्यो
काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टीको स्कुल विभागको प्रमुखमा ईश्वर पोखरेलाई चयन...
अस्पतालमा भर्ना भएका सचेतकको घरमा आक्रमण, मुख्यमन्त्रीद्वारा अवलोकन
बुटवल । प्रदेश नं ५ प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको...
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट सेवानिवृत भई पेन्सन लिनेहरु जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भई...
कृष्णप्रसाद कोइराला श्रावण नक्षत्रमा पुग्दा चन्द्रकला पूर्ण हुने दिन श्रावण पूर्णिमा हो । यही श्रावणको...
समाज वर्गीय छ । उच्च वर्गले सम्भ्रान्त संस्कृति निर्माण गरेको हुन्छ भने आम जनताहरुले...
आहाल र बेहाल !
आफ्नै घर अगाडि सधैं हिड्ने सडकको खाल्टो पुर्न र सहमतिमा तय गरिएको पालो कुर्न...
पुस्तकालय र पठन संस्कृति
माधवकुमार पौडेल पुस्तकालय लेखी, छापी, कोरी, खिची वा यस्तै अन्य विभिन्न माध्यमद्वारा तयार पारिएका पुस्तक,...
परजीवी मनोविज्ञान र हाम्रो नेतृत्व
आज मैले लेबी, चन्दा र राजश्वमा बाँचेको परजीवी वर्गको विषयमा मनोविज्ञानपरक छलफल चलाउन चाहन्छु...